Testosterone Cypionate: Zvose Muviri Wekufanirwa Kuziva
1. Chii chinonzi Testosterone Cypionate? Chinoshanda sei?
Testosterone Cypionate (58-20-8) Mumunda wekuvaka muviri apo zvinotarisirwa zvingave zvakanyanya kukwirira, maawa akawanda ekudzidzira uye kudya kwekudya zvisingakupei mhinduro dzinodiwa munguva shoma yaunoda kuti vaite. Sezvo iwe pasina mubvunzo unoziva, panguva ino, iwe wakasiya zvokudya zvose zvegorosi uye unogona kushandisa nguva yako yose yekudzidzira. Zvinoshungurudza kuona kuti hapana chimwe chezvinhu izvi chinoratidzika sechishanda pakufarira kwako. Asi iwe unotofanira kurega here? Aihwa! Kutora Testosterone Cypionate kuchakupa kubudirira kwawave uchitsvaga. Muchikamu chino tichaenda kukuudza nezve Testosterone Cypionate cycle, Testosterone Cypionate inobatsira, Testosterone Cypionate mero uye zvimwe zvose zvaunoda kuziva nezvechirwere ichi.
Chii chinonzi Testosterone Cypionate (58-20-8)?
Iko 8-carbon ester iyo inoita shanduro ye Testosterone. Mumuviri wako unobereka Testosterone zvakasikwa uye unoshandisa mukuwana miviri yakakura uye yakaoma pamwe nekuvandudza pakushanda kwako. Chemto Testosterone Cypionate inoshandisa zvinhu zvakafanana se testosterone enanthate.
Iwe haungatendi kuti Testosterone Cypionate yave iripo kubva kune 1950s. Yakatanga kubudiswa nekambani inonzi Upjohn uye yekutanga inotengeswa seDepo-testosterone. Mumakore ose aya akave akaonekwawo nemamwe mazita mazita e'Duratest, '' Durandro, '' Depovirin. '
Pamberi payo, yakashandiswa kurapa zvinotevera;
Kuenda kumwedzi kunopa ropa.
Testosterone Cypionate inokanganisa mukana umo mutumbi unobereka Testosterone uye nguva yakasara mumuviri womunhu. Sezvo iri ister yakagara kwenguva refu, Testosterone Cypionate hafu yeupenyu ndeye 8-12 mazuva anoreva kuti inogona kuramba iri mumutambo wako kwemazuva mashoma makumi maviri. Pamusana pehafu yehupenyu, Testosterone inowanzoshandiswa mu testosterone replacement therapy. Haisi kutarisirwa kazhinji nokuti chidimbu chechirwere ichi chinoramba chiri kushanda mumuviri kwenguva refu, uye izvi zvinoreva kuti haufaniri kuwana majekiseni iye zvino. Kazhinji, inopihwa sejisi rinopinda mumagetsi mujinga.
2. Testosterone Cypionate dosage
Zvimwe zvinhu zvinogadzira Testosterone Cypionate (58-20-8) iwe uchatora. Somuenzaniso, kana iwe uchida kurongedza misungo uye kuvandudza mitambo yako, unofanirwa kutora dhigirii pakati pe100-200mg vhiki nevhiki. Kana iwe usingaoni chero kuchinja mumuviri wako mukati memwedzi wokutanga wekushandisa, iwe unogona kuwedzera Testosterone Cypionate yako. Parizvino iwe watoona kana muviri wako unobvumira izvi zvinodhaka zvakanaka.
Vakawanda vemuviri vemuviri vanorwara nehutsika hwe testosterone pamusana pokushandiswa kwe steroids kusarudza kutora Testosterone Cypionate kuti vatarisane nemamiriro acho ezvinhu. Nokuda kweizvi, chirwere che 200mg-400mg chinokurudzirwa. Iko kune hurukuro dzakawanda dzinopfuurira pamusoro pekuti kana kuva nechirwere chakakura nguva shomanana chiri nani pane kuva nemadiki maduku kakawanda. Kuti urege kudzivirira miitiro yakanyanya, miviri yepamusoro inoshandiswa kakawanda ndiyo nzira yakarurama yekuziva zvikwereti apo iri kunonoka pamuviri. Nandrolone Decanoate Uses, Purogiramu, Dosage, uye Zvinoshungurudza
Testosterone inofungidzirwa seyakasikwa uye inozikamwa kuva nemigumisiro yakawanda kunyange payo. Iko Testosterone Cypionate yekuvaka muviri kunobatsira kana mumwe achifamba achishandisa steroid iyi pamwe nehurumende yakakodzera uye kuva nekushanda zvakaoma. Mune mamwe mazwi, izvo steroid inoita ndeyokuwedzera simba iro muiti wekugadzirisa ari kuisa mukudaro kuita kuti rive rakabudirira. Kana mumwe achitora Testosterone Cypionate uye asingashandisi kunze, muviri unoshanduka uchava usina hanya.
Testosterone Cypionate cycle inowanzofananidzwa kwenguva yakareba ichienzaniswa nedzimwe shoma esters anabolic steroids. Zvinotora kuzere kwevhiki dze 10-12 nekuchinja kunooneka pakati pe4th kusvika kumavhiki matanhatu. Izvi zvakasiyana neyeta shoma ester anabolic steroid cycle inotora mavhiki e4-6 nekuchinja kunooneka pakati pevhiki yechipiri nechina.
Kana uri kutamba Testosterone Cypionate cycle, unogona kutora zvakakwirira sa 500mg-600mg kwevhiki. Izvi zvinowanzopatsanurwa kuva majekiseni maviri angangodaro aitwa musi weMuvhuro neChishanu. Kana imwe yero miviri yakagadzikana, unowana 250mg kana 300mg kaviri pavhiki.
Kune vanotanga, zvinonzwisisika kuti vanotora 250mg vhiki nevhiki, vakapatsanurwa kaviri pavhiki kuti vawane 175mg mazuva ose maviri pavhiki.
Post cycle therapy inokosha sezvakangoita purogiramu yacho pachayo. Pane imwe nguva yakashanda Testosterone Cypionate cycle, iwe unofanirwa kuva nechirapa ichi. Chikonzero chekuita izvi ndechekuita kuti muviri wako udzoke kwawakanga uripo usati watanga kufamba. Clomid uye Nolvadex ndiyo inoshandiswa zvakanyanya pamishonga inobatsira kutsvaga kutanga kugadzira Testosterone mumuviri.
3. Testosterone Cypionate cycle
Mazuva ano Testosterone Cypionate ndiyo inoenda-steroid munyika yekuvaka muviri. Hapana steroid iri nani inovaka mashoma sezvo steroid iyi inoita. Utano uye vane mafungiro vanoda mafaro vanosarudza kushandisa steroid iyi nokuti ine anrogenic / anabolic yero ye 100. Iyo yakakwirira inoreva kuti Testosterone Cypionate inobatsira yakawanda inobva musimba remasumbu, basa uye ukuru.
Panguva ya Testosterone Cypionate cycle, iwe unogona kumhanya uri woga kana kuisunga pamwe chete nedzimwe steroid. Inonyanya kukosha nekuti inobatanidza uye inogona kushandiswa neicho chaiyo chose kuti ikubatsire kuzadzisa zvinangwa zvako. Iyo chete inosvika apo iwe unofunga kuongorora imwe steroid hafu yeupenyu. Testosterone Cypionate inonyanya kuwedzera nevanabolic steroid iyo ine zviyero zvakadai sekusunungurwa uye hafu-upenyu. Semuenzaniso, Testosterone inonyanya kugadziriswa neTrenbolone Enanthate kupfuura Trenbolone Acetate maererano nehutungamiri uye chirongwa chejojo. Trenbolone Acetate ine hafu yehupenyu hwemazuva matatu apo iyo yeTesttosterone Cypionate ine mazuva gumi namaviri uye, naizvozvo, ichave yakakuomera iwe paunenge uchironga nguva yekutora zvose steroid. Paunosarudza steroid kuti uwane Testosterone Cypionate, unofanira kufungisisa hafu-upenyu hwevaviri steroid. Izvozvi ndizvo zvazvichava nyore kwauri. Nezvo, iwe unogona kutungamirira zvose panguva imwechete uye nehuwandu hwakafanana. Methenolone Enanthate vs Methenolone Acetate - Best Cutting Steroid
Zvisinei, vamwe vadzidzisi vekuda vanoda kuigadzirisa nekukurumidza kuita steroid kuti vakwanise kukanganisa mhinduro zvisati zvaitika kwemavhiki e4-6 apo mumwe munhu anotanga kucherechedza Testosterone Cypionate effect.
Tora 150-250mg ye Testosterone Cypionate kaviri pavhiki. Zvinogona kuva musi weMuvhuro neChishanu.
Tora 5mg yeArimidx mazuva ose matatu
Kubva pavhiki 4 kutora 500iu HCG mushure memazuva mana. (Kana zvakakodzera)
Vhiki 12- Tora 100mg ye Clomid uye 20mg yeNolvadex.
Vhiki 13 kusvika vhiki 15- Tora 50mg ye Clomid uye 20mg yeNolvadex.
Izvi zvinonyanya kuzivikanwa seCheto Testosterone Cypionate uye ndiyo yakanakisisa kune ani zvake anoronga kushandisa Testosterone Cypionate kokutanga. Chero chero yekutanga yevana anabolic steroid cycle inofanira kuva ne testosterone chete. Mumwe anogona kuenda kune rimwe divi re testosterone rinovakodzera, uye kwatiri, tinosarudza kushandisa Testosterone Cypionate. Testosterone ndiyo yakachengeteka anabolic steroid kuti munhu atange kushandiswa nokuti muviri unowanzozvibereka uye inogona kuva nzira yakanaka yekucherechedza kuti muviri wavo unoita sei nekushandiswa kwayo. Kana muviri wako ukasagadzikana ne testosterone purogiramu chete, inoratidza kuti iwe unogona kutambura nemagumisiro akaoma kana ukasarudza kushandisa mamwe makemikari. Iko panguva ino iwe unogona kuziva kana muviri wako unogona kutsungirira steroid uye kupedza kusvika mukati-kati.
Vhiki 1 kusvika vhiki 12-Tora 600mg ye Testosterone Cypionate
100mg / rimwe zuva rimwe reTrenbolone Acetate
50mg / rimwe zuva rimwe reWinstrol
0.5mg / rimwe zuva rimwe re Armidex
Vhiki 1 kusvika vhiki 12-Tora 500mg Testosterone Cypionate kwevhiki
Tora 400mg yeNandrolone Decanoate (Deca Durabolin)
Vhiki 1-vhiki 4-Tora 25mg pazuva Dianabol
Izvi ndizvo zvinoshandiswa zvinowanzoshandiswa Testosterone Cypionate bodybuilding. Vakawanda vanogadzira muviri vanovhiringidza kuti uve mutangi wekutanga, asi zvakakosha kune vashandisi vepakati vakaedza kuongorora kuti miviri yavo inopindura sei kushandiswa kwevanabolic steroids. Sezvakatsanangurwa pamusoro apa ani naani ari kushandisa steroids kwekutanga anotanga kutanga ne testosterone kungofanana chete kana iye angave ane zvinokuvadza uye angave asina kukwanisa kutaura chimiro chaiyo chakakonzera.
Hardcore / Advanced Advanced
Vhiki 1 kusvika vhiki 12-Tora 100mg ye Testosterone Cypionate vhiki nevhiki
Vhiki 1 kusvika vhiki 6- Tora 50mg yeTrenbolone zuva nezuva kana 600mg vhiki nevhiki.
Muchikwata ichi chinopfuurira, unoona kuti Testtosterone Cypionate dosage iri padiki. Chikonzero cheizvi ndechekuti Testosterone Cypionate inoshandiswa kuTesttosterone Replacement Therapy uye muyero ndeyekuti kuve nechokwadi chokuti pane testosterone yakakwana mumuviri kunyange pasina michina yayo chaiyo. Kana muviri wako une maitiro echokwadi e testosterone, pane kutonga kweweserogen mazingawo. Somugumisiro, hapana chikonzero chekushandisa aromatase inhibitor. Izvozvo ndezvokuti kune chidimbu chepasi che testosterone chinotapira ku estrogen.
Somugumisiro, Trenbolone Enanthate inogona kupa hutachiona kukura kwose kuburikidza nekufamba. Izvo, zvakadaro, zvakanaka kuziva kuti Trenbolone Enanthate haifaniri kushandiswa nemutangi. Iyo yakagadzirwa yakashandiswa inogona kushandiswa sekucheka-shanduka, kuomesera kwemazhinji, uye kubvongodza.
4. Testosterone Cypionate migumisiro
Munhu wose akashandisa steroid iyi inotsvaga pamusoro pesimba rayo uye hazvishamisi kuti inofungidzirwa seimwe yemasikirini makuru munyika nhasi. Chimwe chinhu chinoita kuti uve shamwari kune vakawanda ndechekuti inopa migumisiro inoshamisa munguva pfupi.
Kuti uwane huwandu hunobatsira kubva kushandiswa kweTesttosterone Cypionate, unofanirwa kushandisa dhiyo yakakodzera. Nokuita izvi, unowana mhinduro yakafanana neyeyaunogona kuwana kubva pakushandisa steroid yakasimba yevanabolic. Mushure mokunge matambo gumi nemaviri-kwevhiki, vanhu vazhinji vakaona kuchinja uku.
Kuwedzerwa mafuta kurasikirwa kunogona kuwanikwa kuburikidza nekudziviswa kweesrogen
Kukurumidza kugadziriswa kwemisungo
Massive muscle kuwana
Sezvo vazhinji vedu tingatarisira, munhu wepakati pega ari kushandisa Testosterone Cypionate achawana migumisiro iri nani kubva pakuvaka muviri kana achienzaniswa nomunhu asingashandisi chero chinhu. Chii chichakushamisa iwe kuwedzerwa kwekusiyana kwakaita mapoka maviri evanhu kana tikasarudza kuenzanisa iyo mbiri. Heano chimwe chezvidzidzo zvakaitwa zvinoratidza mutsauko zvakajeka;
Vhiki gumi nembiri-vekutsvakurudza kwakabatanidza boka revarume makumi mana nevashanu vane hutano hwemazuva ose uye vari pakati pemakumi maviri nemakumi mana. Vanhu vose vaiva nedzimwe chiyero chekureruka kudzidziswa kubatanidzwa. Vakabva vagoiswa mumapoka mana sezvinotevera;
Boka 1-Boka rokutanga harina kugamuchira chero Testosterone Cypionate dosage uye harina kuita chero ipi zvayo yekurovedza muviri.
Boka 2-Zvikiro izvi hazvina kuita chero chimiro chekudzidzisa muviri asi zvakagamuchira dhiyo ye 500mg yeTesttosterone Cypionateevery vhiki. (Akashandisa steroid pasina kushanda kunze)
Boka 3-Boka iri rakashanda asi harina kushandisa Testosterone Cypionate. (Ndiyo chete yairema kudzidziswa)
Boka 4- Iri ndiro boka rakashandisa uye rine jekisi yevhiki nevhiki ye500mg ye Testosterone Cypionate.
Muchidzidzo ichi, kudya kwose kunobatsira munhu wose ari muboka akave akaenzana maererano nehutatu hwemuviri. Yaiva yakanyorwa, yakasimbiswa uye yakagadziriswa kana zvichidiwa. Kune mapoka maive nokudzidziswa kuyerwa, kureva, boka re 3 ne4, zvose zvishandiso zvaive zvichengetwa vhiki nevhiki.
Izvozvo zvinoreva kuti misiyano chete pakati pemapoka iwayo ndeyekuti vamwe vairema kudzidziswa apo vamwe vakanga vasina. Vamwe vakanga vari kushandisa Testosterone Cypionate asi vamwe vakanga vasina. Zvimwe zvinhu zvose zvinosanganisira kudya uye kuita zvekurovedza zvaive nguva dzose.
Izvo zvakatevera zvakaziviswa mushure memakore;
Boka 1-Ukwanisa kutotanga kuti chii chakaitika. Pasina maitiro uye steroid, pakanga pasina kuchinja mumuviri.
Boka 2- Nokushandiswa kweTesttosterone Cypionateand hapana nhengo dzekushandisa maitiro dzakakwanisa kuwana pfupi neA14lbs yemasumbu.
Boka 3- Nekudzidzira uye pasina kushandisa Testosterone Cypionate, nhengo dzakagamuchira 8lbs yemasumbu.
Boka 4- Tenda kana kwete, kurovedza muviri uye kushandisa Testosterone Cypionateyakawedzerwa boka nhengo ina dzekutora 25 lbs.
Hazvisingashamisi kuti chero upi zvake wevashandi vehutano ari kushandisa Testosterone Cypionate achava nemigumisiro ine nani pamusoro pekuvandudzwa kwehutano uye kuvaka masumbu kana achienzaniswa nomunhu asingashandisi steroid iyi.
5. Testosterone Cypionate hafu yeupenyu
Inofananidzwa kune mamwe maitiro maviri eTesttosterone, Testosterone Cypionate hafu yeupenyu ndiyo yakareba kwenguva yakareba nokuda kwechikuru ester yakaiswa. Izvi zvinorevei kuti kana mushure mokuyikira iyo, inotora mutumbi kwenguva yakareba kuti iiputse uye munguva iyo imwe nguva inowanzobudiswa muropa rakareba zvishoma nezvishoma.
The Testosterone Cypionate hafu yeupenyu iri kumativi 8-12 mazuva anoshoma kudarika iya ye Testosterone Enanthate. Kuenzaniswa nehafu yehupenyu hweTesttosterone kusimudzika uye Propionate kune misiyano yakakura muhafu yavo-upenyu. Testosterone Cypionate inoonekwa mumuviri kwenguva yakareba, kureva, mwedzi mitatu.
6. Testosterone Cypionate yekucheka
Kucheka ndeimwe iyo imwe inoda kurerutsa uye kuoma sezvinogona. Vanhu vazhinji vakatsvaka izvi vasati varova gungwa kana kuti vazvipinza mumakwikwi. Kazhinji, kutengesa kunotora anenge anenge gumi nemaviri kusvika kune gumi nematanhatu. Munguva ino, vakawanda vanogadzira muviri vanoenda kune steroid nevakawanda vanosarudza kushandisa Testosterone Cypionate, Winstrol, Anavar, kana Trenbolone.
Zvimwe pane kusarudza steroid yakarurama, kudya kwako uye cardio inofanira kuva yakakwana. Vanhu vazhinji vanokundikana kuwana izvo zvavari kuda nekufunga kuti munhu anogona kuita kukwidza kunenge kusina kudzidziswa. Kumhanyira, kukwira mugomo, kuputika kune zvimwe zvezvinhu zvinokurumidzira iwe Testosterone Cypionate kucheka zvabuda.
Kudya kunofanira kunge kune makoriki mashoma, uye ketogenic inogona kuita zvishamiso pamuviri wako. Iwe haugone kuisa zvinhu zvako zvose uye kuedza kuva neTesttosterone Cypionate jabs, asi iwe uri kutora mune mamwe makoriri kupfuura muviri wako unoda uye unotarisira kuderedza pamafuta emuviri.
Tenga Testosterone Cypionate kubva kwatiri uye eedze mukutengesa kwako. Mishonga yako icharamba yakasimba, uye mafuta ose asingadiwi achazununguswa.
7. Testosterone Cypionate for bulking
Kushandura muviri ndeyekuti vashandi vemuviri vanoshandisa kuwedzera hukuru hwemisungo yavo. Kana uchida kutakura pamasumbu uye usingazivi zvokuita, iwe unofanira kutarisa izvi;
Purogiramu iyo chinangwa chako chiri kukuvadza mitsipa yako inofanira kuva nezvinhu zvitatu zvinotevera.
Panyaya kudya, iwe unofanirwa kutora mune mamwe makoriri kupfuura izvo muviri wako unoshandisa. Iwe, saka, unoda kuziva calori yako yekushandisa uye uone kuti hausi kutora zvishoma kana kupfuura. Kuzokwanisa kuita izvi, unoda kuverenga nhamba yekoriyori yaunoda kutora pazuva uye igovane nayo nhamba yezvokudya zvaunodya mune rimwe zuva.
Unofanirwa kupi kutarisira kuwana makoriri kubva?
Kana pane zvekuita muviri, iwe unofanirwa kunge uchizviita kane kanenge pavhiki. Sezvo iwe uchida kuwana hutano hwakanaka, iwe unofanirwa kutora chikamu pakudzidzisa simba nokuti inobata basa rinokosha pakuwedzera ukuru hwematumbo ako.
Pamusoro pekuwedzera, Testosterone Cypionate ndiyo yakanakisisa steroid cycle iwe waunogona kusarudza kushandisa panguva yekukanda. Iko kukuvadza steroid kunowedzera kuti vanhu vazhinji vanoshandisa Testosterone Cypionate, Deca Durabolin uye Dianabol.
Kuwanda kwekubvisa steroid maitiro kunotora vhiki gumi nemaviri. Steroid iyo iyo shoma shomanana inotorwa kwevhiki yekutanga kusvika kumatanhatu apo Testosterone Cypionate inotorwa kuitira mamwe masvondo gumi nemaviri neyero ye 500mg vhiki nevhiki. Kuti uwane zvakanakisisa zveTesttosterone Cypionate, unofanirwa kuve nechokwadi chokuti iwe wakatora dhiji yakakodzera muhupenyu hwose.
8. Testosterone Cypionate inobatsira
Nhengo dzakanaka uye huri nani huri nani hunoita kuti Testosterone Cypionate inopa inoita kuti iite imwe steroid inobwinya iyo iyo yose inogadzirisa muviri inofanira kushandisa. Heano mamwe emamwe Testosterone Cypionate inobatsira;
Kuvandudzwa kwebasa mukurovedza
Dzimwe nguva iwe unganzwa uchinetseka nekudzidzira kwako pane zvekurovedza. Kunyange kana iwe uchiziva zvaunoda, unogona kuomerwa kuisa simba rako pauri. Nenzira yakanaka, kushandiswa kweTesttosterone Cypionate kuchakuita kuti utange kudzidziswa nepamusoro-soro kupfuura iwe.
Chimwe chinhu icho vazhinji vanogadzira muviri vasinganzwisisi ndechokuti kubudirira kwekushanda ndiko chii chichaita kuti iwe usvike kune zvinangwa zvako. Hazvina mhosva kuti chinangwa chako chinogona kuva chei, kuva nemasimba makuru, kurasikirwa nemafuta; Kuvandudza gym yako yekuita zvinokutungamirira iwe danho rinotarisana nechinangwa chako. Zvimwe pane kuva nesimba, steroid iyi ichaita kuti iwe ugare wakatarisira nguva dzekudzidzisa yako zvichiita kuti uve nemazuva mashoma. Kuva nemitambo yako yekurovedza kakawanda uye kudzidzisa zvakawanda ndiyo nzira yekupedzisira yekuita izvo zvaunoda. Sekuguma, iwe uchazadzisa zviwanikwa zvako nokukurumidza.
Kuva zvose anabolic uye androgenic, Testosterone Cypionate inogona kubatsira mumwe mukukanda uye kuvaka misimba yavo. Avo vanomhanya Testosterone Cypionate cycle vanogona kutarisira kuwana zvakakwana semadhora makumi matatu kana vakave vachitsanya kudya kwakasimba uye vari kudzidziswa zvakare.
Testosterone Cypionate inobatsira muiti wekugadzira miviri kuburikidza nekuwedzera chiyero chekuita nitrogen mumisungo. Nokuti mapuroteni anowanzoitika nitrogen inofanira kuvapo, uye mapuroteni anobatsira pakuvaka uye kugadzirisa mishonga yemisumbu. Apo pane huwandu hweprotini huri mumuviri hunoreva saka pachava nekuwedzera kwemasumbu ekukura.
Inodzivirira mapfupa nemajoini. Nokuita kuti kugadzirwa kwegorgen kuwedzere, unogona kuva nechokwadi chokuti mazamu nemapfupa zvichave zvakanaka.
Inogadzirisa chiyero chekugadzirisa nekugadzirisa
Imwe yeTesttosterone Cypionate inobatsira ndeyokuti inokurudzira mishonga ye "cell activity". Paunenge uchishanda kunze, mamwe masvikiro angangoparadzwa, uye aya masero anokosha pakugadzirisa kukanganisa. Mune mamwe mazwi, Testosterone Cypionate inodzivisa kuparadzwa kwemashutu angangoitika nekuda kwemigumisiro yemisumbu catabolism. Somugumisiro, unokwanisa kushanda kwenguva yakareba usina kushaya simba kana kuneta.
Testosterone Cypionate inokurudzirawo kubudiswa kwemasero matsvuku eropa kuti zvibvumira kugovera kwakakwana kwe okisijeni mumumatumbo, uye somugumisiro, unogona kushanda zvakaoma.
Wedzerai zvepabonde drive
Inogona kunge isingabatsiri mukufamba kwako kwemuviri, asi zvinokosha kuti ufare. Kusiyana nedzimwe steroid dzinogona kuita kuti iwe usanzwa semunhu ari mubhedha, izvi zvinowedzera libido yako. Kutora Testosterone Cypionate kuchaita kuti iwe uve nemafungiro ayo kana uchida.
Inowedzera simba mazinga
Heino chimwe chikonzero nei iwe uchifanira kutora Testosterone Cypionate kana iwe usina kutanga. Kuva nemasimba ako emafambiro kutama nechechi chakakwirira hachisi chimwe chinhu chaunokwanisa kubudirira zvakadaro. Running a Testosterone Cypionate cycle inokusimbisai kuti nokuti inobatsira zvikuru munzira iyo mishonga ine utano yakagadzikana inoshanda. Mishonga inogona kubvumirana zvakanyanya uye zvakaoma zvipikiso, kunyanya simba rinogadzirwa uye rakasimba iwe. Masteron Propionate kana Masteron Enanthate? Ndeipi iyo iri nani kwauri?
Kunyanya kusimba hakurevi kuti iwe unogona kusimudza zvinhu zvakawanda kana iwe unokwanisa kuzvirumbidza kune shamwari dzako zvekare, zvinoreva kuti iwe unokwanisa ikozvino kudzidzisa zvakasimba uye kunyanya zvakanyanya. Dzidzo yakawedzerwa inotungamirira kumatomu akanaka uye makuru, uye steroid inowedzera kubereka kwekushanda kwako.
9. Test Cyp reviews
Zviuru zvevanhu vomuviri vakagamuchira Testosterone Cypionate kubva kwatiri, uye vose vakagadziriswa, vakashandurwa uye vakaona kuti libido yavo yakwira. Vanenge vose vakaona zvikomborero chaizvo zvinouya nekushandiswa kwe steroid iyi. Heano huwandu hwekuongorora kwatakabva kune vatengi vedu;
Daiyu anoti, "Hazvisi kwenguva refu kubva pandakatenga izvi kumurume wangu. Ndakanzwa nezvazvo kune kwandaishanda, uye vandaishanda navo vose vaishungurudza kuti steroid iyi yakava sei chinhu mukuvaka muviri. Iye zvino anotaura kuti akacherechedza kukurudzira mune simba iro rinomuita zuva rose. Sezvo akanga ari mukugadzira muviri kwemakore, akanga arasikirwa nepfungwa mukurovedza, asi nhasi iye anodzidzisa kamwe kamwe kwemazuva maviri. Testosterone Cypionate yakamubatsira mukurovedza muviri, uye ini ndaizokurudzira kune chero upi zvake wemhizha kunze uko anonzwa sokuti kudzidziswa kwake kwaenda kumaodzanyemba. "
Zhang anoti, "Kwange yava mwedzi kubva ini ndakamhanya Testosterone Cypionate cycle. Ndine mune imwe nguva yakashandisa mamwe maitiro ekugadzirisa muviri, asi Testosterone Cypionate inowanikwa inoshamisa. Ndine muscular kupfuura zvandakanga ndiri, uye shamwari dzangu dzose pamitambo yekurovedza dzinoramba dzichindibvunza zvandiri kushandisa. Kunyange mushure mekupedzisa kupoteredza mishonga yangu ichiri kuoneka, uye ndizvo zvinoita kuti ndinde chigadzirwa ichi kunyanya. Zvose zvangu musana uye mafuta ane tummy apera, uye handigoni kuvonga chigadzirwa ichi chakakwana. Ndiri kutenga nguva nenguva. "
Wang lei anoti "Mufudzi wangu akatsanangura izvi kuti acheke nokuti ndaifanira kurerutsa mushure mekunge ndawana mafuta mazhinji panguva yechiviri changu chepamuviri. Ndaifunga kuti zvingave zvakaoma kurasikirwa nazvo uye ndakatya kurasikirwa nebasa rangu rokuenzanisa. Mushure mekuedza kupisa makorikiti ane mapapiro emapfudzi, misoro yepamusoro uye mazana e squats pasina shanduko, ndakatsvaga mazano kune imwe nyanzvi. Akandipa chirongwa chekudya chine utano hwakanaka bedzi uye akandiudza kuti ndiende kutanga kushandisa Testosterone Cypionate. Zvimwe pane izvozvo, ndakaenderera mberi ndichiita uye ikozvino mavhiki matanhatu kubva pandakatanga kutevera mazano ake. Iwe unogona kufunga kuti ndiri kuwedzeredza, asi muviri wangu unotaridzika zviri nani kudarika makore gumi akapfuura. Mafuta acho ose aenda, uye kana akakumbira kuenda kumakwikwi nhasi, ndinotenda kuti ini ndaizobuda zvakanakisisa. Iwe haufaniri kuputsa jira rakawanda nekunyanyisa muviri muviri muviri chete, shandisa Testosterone Cypionate uye tarisa muviri wako uchinje kune muviri wehope iwe wave uchichida. "
Meifeng anoti "Mumwe angafunga kuti kutarisira kwakanaka kwevatengi hakupo munguva ino, asi chokwadi ndechekuti ichiripo. Ndakapinda mu buyaas.com paIndaneti sezvo ndaitsvaga nzvimbo yakanakisisa kutenga Testosterone Cypionate online. Sezvo vaine mhinduro dzakanaka, ndakasarudza kuvapa muedzo. Ndakarayira zvechigadzirwa uye ndakaita zvikwereti zvose. Mushure memamwe mazuva, ndakacherechedza kuti ndakaratidza nzvimbo isina kururama uye ndisingakwanisi kufungidzira kuti mari yangu yaizoenda pasi. Iwe unoziva manzwiro anokurova iwe paunenge uchimirira nomwoyo wose kurongeka kwako kuti ununurwe uye ona kuti hazvizoitiki. Ndainzwa sokuti ndakanga ndichirasikirwa uye ndaifanira kuita zvakasimba. Ndakatarisa ruzivo rwekufambisa mashoko uye ndakacherechedza kuti zvinhu zvakanga zvichiri kufamba. Ndaifunga kwandiri, zvakadini kana ndikasangana nekutengesa kwebhasias.com mutengi? Ndakabva ndaenda kune "taura nesu" chisarudzo uye tikaratidza dambudziko rangu kumumiririri wevashandi. Ndakakumbirwa kuti ndibudise nhamba yangu yehurumende yandakaita, uye pasina nguva nguva nyaya yacho yakagadziriswa. Chikwata changu chakasvika mukati memazuva maviri anotevera, uye ini ndichakuudza pamusoro pemigumisiro mukati memavhiki manomwe anotevera. Izvo zvinotambudza zvakakosha, uye ini ndinoonga kambani iyi nekugadzirisa matambudziko angu. Zvakaitika kwandiri navo zvakaratidza kuti havasi ivo mushure mokunge vatengesa, asi ivo vane hanya nevatengi vavo. Ndichange ndakatenga pano kakawanda, kwete nokuti basa ravo revatengi ndiro rukudzo rukuru asi nekuti ivo vechokwadi uye ndinovadawo munhau dzakanaka. "
Bolin anoti "Sezvo ndakatendeuka makumi mana, hupenyu hwangu hauna kumbofanana zvakare. Handisisiri kushingairira kuenda kumitambo yekurovedza, uye ini ndine usimbe pabasa. Ndaiwanzofamba kushanda senzira yekudzidzira asi kunyange kutora hafu kwakave dambudziko. Ndakasarudza kushandisa Testosterone Cypionate, uye hupenyu hwangu hwakatendeuka. Ndinonzwa ndakasimba, uye muviri wangu zvino wava kuonda. Ini ndinomhanyira kubasa uye ndisingambofi ndakaneta zvokuti ndinoramba ndichibudirira kwezuva rose. Ndakafunga kuti bhaibheri rangu raizoderera, asi rakakwira. Ichi chigadzirwa chinoshamisa, uye ini ndichange ndichitsvaga kana kamwe pesa yangu ichibuda. "
Guozhi anoti "Ini ndine chido chekurovedza uye ini ndiri mudzidzisi zvakare. Ndinogara ndichinge ndasangana nemasikirwo ayo ane ruzivo rwakawanda. Kuva mune ruzivo rwakanyanya mundima iyi, ndinoziva zvidimbu zvinoshandiswa zvinoshanda uye izvo zvinongoparadza mari yako nenguva. Ndinogara ndichivabvunza kuti vatenge testosterone Cypionate kubva ku buyaas.com kana vachida kutakura pamasumbu uye kuchengetedza chimiro ichocho. Vanenge vese vatengi vangu vadzoka kuzondionga nekuda kwekuchinja kwavakaona pamitumbi yavo. Vakawanda vavo vane simba rakawanda, simba uye musimba mashoma. Kwete ini chete ndinoudza vamwe nezve Testosterone Cypionate asi ini ndinoshandisawo ini pachedu. Kubvira pandakatanga kushandisa steroid iyi, handina kurasikirwa nechidzidzo chekudzidzisa nevatengi vangu. Ndinogara ndichinzwa ndine simba kunyange mushure mekushanda kusvikira nguva. Ndingadai ndabvunza chero junkie fitness kutenga iyi kana vachida kutarisa uye kunzwa zvakanaka. "
Jie anoti "Ndakasarudza kushamisika mukoma wangu nechigadzirwa ichi panguva yaakapedza kudzidza uye achiri kundionga kuti ndive nemusi. Achinetseka zvikuru nezvidzidzo zvake, aigara achidya zvakawanda uye somugumisiro akawana kuwanda kwakanyanya kunyanya mumuviri wepamusoro. Kuzviremekedza kwake kwakaputsika, uye akadzivisa kuenda kumubvunzurudzo nokuti akanga asina chivimbo chakakwana. Ndaida kumupa chimwe chinhu chaisagona kuita kuti afare asiwo akachinja upenyu hwake zvakanaka. Ndakagara nokuda kweizvi nokuti ndaifunga kuti yaizoita muviri wake mutambo uyewo kumupa kuvimba kwaanoda zuva nezuva. Izvo zvazviri, hama yangu yakarashika anenge mafuta ose omuviri. Chivimbo chake chadzoka, uye akazviisa pabasa rehurumende. Ndinoda kuonga buyaas.com pakundipa mukana wekushandura hupenyu hwehama yangu. "
10.Testosterone Cyp inotengeswa
Inonzwa se-superhero apo iwe uri pakubereka. Kunyange zviri nani paunenge uchienda kumitambo uye iwe unogona kuita zvose zvaunoda. Uye kana masimba ako achitanga kubuda, chivimbo chako chinopinda nepamba. Chinhu chinonakidza pamusoro pacho ndechokuti iwe unogona kuchengetedza nezvose zvaunowana kana mushure mokunge uine pCT yakakodzera. Asi iwe unotangira kupi? Iwe unotenga Testosterone Cypionate uye unoisanganisira muhupenyu hwako hwokuvaka.
Unotenga kupi Testosterone Cypionate? Kune nzira dzakawanda dzaunogona kuwana nadzo kunyange kana iwe uchifunga Tenga Testosterone Cypionate online. Kubatsira kunouya nekutenga yako online kutengesa ndeyekuti haisi kunyanya kushushikana uye kwakanyanya nyore. Uyezve, inokuchengetedza nguva nemafambiro ekufamba kubva mune imwe soro kuenda kune imwe kutsvaga steroid yako inosarudzwa. Pano nyaradzo yekugara kwako, unogona kuraira Testosterone Cypionate uye uwane iyo pasina munhu wese aifanira kuziva zvawakangorayira.
Kana iwe uri mutadzi wekugadzira muviri kana uchida kuwedzera pamisungo, iwe unotoziva kuti kutenga steroid kubva panzvimbo inoremekedzwa zvakakosha zvikuru. Nezvinobatsira uye zvipingamupinyi zvavanouya patafura, unofanira kusarudza nzvimbo nekuchenjera kuti uone kuti hauna kuwana steroid yakasvibiswa iyo ichakupa zvishoma zvigaro uye mamwe madhara. Kuti urege kudzika mhuka dzakadaro, iwe unofanirwa kuziva chaipo iwe unogona kuisa mavoko ako akachena Testosterone Cypionate.
Zviuru zvevanhu vanovaka muviri vanofamba nenzira imwechete yekuedza kutsvaga mutengesi akanaka weTesttosterone Cypionate pasina kuisa hutano hwavo panjodzi. Zvinogona kunge zvisingaitiki kuziva chigadzirwa cheTesttosterone Cypionate iwe waunogona kuvimba naye asi utende asi uchitenda kana kwete, iwe wakangoona imwe chete.
Buyaas.com ndiyo nzvimbo yaunotenga yakanaka ye Testosterone Cypionate uye kuitumira iyo kuhofisi yako, chikoro kana kumba nekukurumidza uye yakachengeteka. Inzvimbo chaiye uye yakatendeseka iyo iwe unogona kutenga Testosterone Cypionate yakawanda. Munzvimbo yedu tinotarisa kune vatengi vese uye tinovimbisa kuti tinotakura huwandu hwehuwandu hwehutano hwehuwandu hwematrosiyo hwaakarayirwa.
Hondo yedu yakazvipira inoshanda nesimba kuti ione kuti kwete chete iwe unorugare rwepfungwa panguva yose yekutenga asi iwe unogonawo kufarira basa rinokurumidza uye rinofadza. Kunyange zviri nani, mazano edu anopiwa pamutengo usingatoriki kuve nechokwadi chokuti tinofamba newe muurwendo rwako rwese rwekuvaka muviri kunze kwekuti iwe uchinge uchinge uchichera muhomwe dzako mukati. Raira kubva kwatiri nhasi uye ruzivo rwekutanga-class service.
11.Testo Cypionate vs. Test Enanthate yekuvaka muviri
Mukutsvaga kwako steroid yakanaka, zvimwe unosvika Testosterone Enanthate uye ungave uchinetseka kuti kudanana pakati peizvi nderokuti. Ichokwadi chiripo hapana misiyano yakakura pakati pezviviri. Kunyangwe kana zvose zviri kushandiswa nevarimi vemuviri kuti vawedzere rutivi rweTesttosterone mumuviri, pane nharo inopfuurira iyo steroid inorova imwe pamusoro pesimba. Testosterone Enanthate iEuropean steroid apo Testosterone Cypionate ndiyo Chirungu.
Nhasi, kune mhirizhonga imwe chete iyo inopupurirwa, uye iyo ndiyo makemikari ekugadzirwa kwezvose steroids. Misiyano inouya mumaketani e-carbon ester umo Test E ine 7-carbons apo Test C ine 8-carboni. Mune mamwe mazwi, Test E ndiyo imwe carbon lighter kupfuura Cypionate. Ikoko ndiko kuti kuchinja kwechokwadi kunouya sezvo Cypionate inoputsa pasi zvishoma nezvishoma pane Enanthate ichipa iyo nguva yakareba hafu kupfuura hupenyu hwekupedzisira.
Testosterone Cypionate ine hupenyu hwakareba kwenguva refu apo enanthate ine pfupi. Sezvo Testosterone Cypionate inoramba ichishanda mumuviri kwemazuva anenge masere, muiti wekuvaka muviri anongoda kuve nejojo ​​kamwe pavhiki. Nokuda kweAnanthate, munhu anofanirwa kuwedzerwa nguva yakawanda kuti awane zvinobatsira.
Vamwe vanovaka muviri vanopika kuti Testosterone cypionate inobatsira zviri nani sezvo vachipa zvakawanda kwavari vachienzanisa nezvinobayirwa neanthate. Pamusana pezinga rakakwirira rekuchengetwa kwemvura kunogadzirisa, huturu hwakanyanya hunyoro, uye mapfundo anowedzera zviri nani. Pakupedzisira, munhu anogona kushanda zvakawanda saka zvinobudirira zvikamu zviri nani.
Vamwe vashandisi vakanyunyuta pamusoro pekutsamwa kunouya neInjecting Testosterone Cypionate (58-20-8). Vaya vakashandisa enanthate vakawana ruzivo rwacho rwunonyatsonaka sezvo ruchikonzera kurwadziwa nekushushikana panzvimbo yejojo.
Testosterone: Chiito, Kukwana, Kuchinja, kwakagadziriswa na E. Njeschlag, HMBehre, peji 259-275
Williams Textbook of Endocrinology E-bhuku, NaShlomo Melmed, Kenneth S. Polonsky, P. Reed Larsen, Henry M. Kronenberg, peji 759
Zvinodhaka, Vakatambi, uye Physical Performance, yakagadzirirwa naJohn A. Thomas, peji 96-97.